Nhau - Kuita mushure me cylinder musoro gasket kutadza
Isu tinobatsira nyika ichikura kubvira 1991
Fonera Tsigiro 0086-15763807215 0086-535 6856565
Tsigiro yeemail xsb@ytsc.cn 805870329@qq.com
Rabha Coated Metal Material
Asina Asbestosi Gasket Chinyorwa
QF Hi-Q Nhevedzano
FBYS Inodhura-inoshanda Series
Kuita mushure me cylinder musoro gasket kutadza
Kana mota ikatyoka ichityaira, kune zvikonzero zvakawanda zvekutadza, uye chikamu chega chingatadza. Chii chichaitika kune iyo cylinder musoro gasket kutadza? Iyo yakazara mamiriro ezvinhu achapihwa kwauri nemugadziri wedu. Rega ndigozvizivisa.
Nekuti iyo humburumbira gasket ine basa rekuisa chisimbiso painenge ichishandiswa, kana chikamu chikakundikana, zvino chichava nekumwe kushomeka kwekushandisa. Kana iko kusimbisa kwayo kusinga vimbiswe, iyo yakavharirwa oiri nemvura zvichadonha, izvo zvinokanganisa kushanda kweimwe nzvimbo.
Mheremhere dzisina kujairika dzinowanzoitika; kufefetera mutangi remvura uye anobatsira emvura tangi yemota; kushaya simba kwekutyaira mota; hutsi chena mupombi yekuzadza yemota, iyo inogona zvakare kukonzerwa neChinokonzereswa nesirinda gasket kutadza Izvi zviitiko zvakajairika, asi zvinokanganisa kuchengetedzeka kwemota, saka inofanira kugadziridzwa uye kutsiviwa nenguva.
Iyo kambani inotora yepasirese dhizaini dhizaini dhizaini nekugadzirisa matekiniki uye inoita yepakutanga utsanzi.
Chii chichaitika kana humburumbira musoro gasi ...
Chii chekuteerera kana uchiisa ...
Chekuita kana paine dambudziko ne ...
Nyaya dzinoverengeka dzinoda kutariswa mu ...
Kuita mushure memasilinda musoro gasket fa ...